Xisbiyadda Somaliland waxaan leeyahey dadkii iyo xoolihibaa abaaro baa dambaska ka dhigey maxaa inoo qorshaa;by fuaad qawdhan arimaha bulshada woolwich London. | Somaliland One
Xisbiyadda Somaliland waxaan leeyahey dadkii iyo xoolihibaa abaaro baa dambaska ka dhigey maxaa inoo qorshaa;by fuaad qawdhan arimaha bulshada woolwich London.
January 8, 2017 - Written by shaqalaha somalilandone Media Group
Ilaahey baa mahad iska leh inaga dhigey muslin
Waxaan doonayaa in bulsho weynta somaliland ee ah dad jaceyl wannaaga iney sanadkan iyo kii horeba inagu habsadeen abaaro ka sii daran ki wii daba dheeer, waxaaan ku jirnaaa bishii kowaad ee 2017 , waxaaan wadda ogsoonahey in bishan iyo labada biloood eee ka dambeeyaba aayney baraney iney yihiin bilaha jilaalka ah ee roobku aanu dain, markaa maxaa inoo qarshaa hadii aaynu nahey dadweyanaha somaliland xisbiyada qarankaba, tan oo kale waa tii aaynu gacanta is qabsan laheeen, habeen iyo maalinba waxaan la seexan laaanahey hadii aanu nahey qurboo jooga somaliland dhibatadaa abareed ee ku habsatey maliyiin hooyin iyo maati iyo xoolo ma yeedhaana iyo dayaca ku dhacey iyo duruufaha nolaleed iyo daldalooda ka muuqda, waa inaan arintaa ka kacnaa oo gacamaha is qabsanaa.
Xisbiyada somalilandna waxaan leeyahey , dadkiinii iyo xoolahiinii abaaro baa digada iyo dambaska ka dhigey, waa kuwaad ka dooneysaaan iney idiin siiyaan voteka. ilaahey ma baqa, waar u tudha dadka iyo xoolahaba oo lacagtan aad xafladaha ku qabsameeysaan cows iyo daaqsnimo xoolaha ugu sameeya, dhamaan gabalada somaliland waaa in gobolwaba 10 riig ama ceeel iy biyaa dhulka laga soo saraaa , weynu sameeyn karnaa waxaa inoo sameenaya lacag jaban 15 milyaon doler, waxeeynu galney bishii kowad ee jilaalka 3 bilood oo roooblaana inagu soo socta, iyadoo ta ialhey maqan tahey , waaar waxani maha maamuul sedexdiinuba isma dhantaan. waar xibiyada mucaardku waa iney dadkooga dowlada u gar garacaan oo ku qasbaan sidii dadka biyo dhulka looga soo saari lahaa, ilahey biyaha isgaa dhuka ku shubey si aaynu ugalaa soo baxno. ilaheyna isgaa yidhi shay walba biyaan ka yeelney, waaar intaad ilaahey ka baqataan dadka ceelalal badan u qooda iyo daaqsnimo farabadan iyo waa in loo diyaar garoobi si aaney uga hortagno abaaraha damabe ilaahey inagama keene.
Waa inaad joojisaan xafladaha waa inaad dhulka abarahau ka jiraan aad wakhtiyo badan ku lumisaan si qabi giinu u naxo waar dadka u kaca oo hayadaha iyo calamka ula hadla si dhulka biyo inooga soo saraaan. idinkuna waa inaad cagagafyo kaxasataan oo biayah dooxayada xidhaan si aaynu u cabno xiliayiyada abaaaruhu jiraan. xooolahana loo beereo daasnimo fara badan oo gobolwalba, sidaa hadii aaynu yeelno walahi ilahey wuu ina siinaiya ahimiladeena.
ilaaheybaa mahad iska leh inaga dhigey muelin
waxaaa qorey fuaad maxamed qawdhan ariamah bulshada woolwich london
facebook fuaad qawdhanfuaad
Copyright © 2017 Somaliland One ®All rights reserved.